Fenoarivo Atsinanana : Miaraka amin’ny K25 ny vahoaka -
AccueilSongandinaFenoarivo Atsinanana : Miaraka amin’ny K25 ny vahoaka
Fenoarivo Atsinanana : Miaraka amin’ny K25 ny vahoaka
Nangorom-potsy ny tao amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana tamin’ny fandalovan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, omaly. Feno hipoka ny toerana nihaonan’ity kandidà ity tamin’ireo mponina tao an-toerana. Tsy vitan’izay fa noraisin’ireo vahoakan’i Fenoarivo Atsinanana tamin-kafaliana, niampy horakoraka i Dada tamin’izany.
Araka izany, tsy hain’ny kandidà Marc Ravalomanana ihany koa anefa ny tsy nankasitraka izany hafalian’ny mponina tany an-toerana izany, ka nampisehoany ny hafaliany ihany koa. Nambaran’ity kandidà laharana faha-25 hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena ity tamin’izany fa hanova ny fiainan’ny vahoaka ao anatin’ny fotoana fohy izy. Hanova ihany koa ny fiainam-pirenena ao anatin’ny 100 andro amin’ny alalan’ireo tetikasa sy programan’asa maro, izay voarakitra anatin’ny fandaharan’asa “Manifesto” sy ny MAP II izany.
Tsy vitan’izay, fa nampanantena ireo mponina ao amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana ny kandidà Marc Ravalomanana amin’ny fanatsarana ny fari-piainan’izy ireo. “Hatsaraina ny fari-piainan’ny mponina eto Fenorivo Atsinanana. Hampiakarintsika ny vidin’ny lavanila mba hampidi-bola mihoatra lavitra noho ny teo aloha ka ahafahanareo manatsara hatrany ny fiainanareo. Efa tafiditra amin’ny fandaharan’asako avokoa izany. Eo ny firesahana amin’ireo firenen-dehibe amin’ny fiaraha-miasa amin’ny vokatra lavanila sy ny maro hafa. Noho izany, mila mifanome tanana isika amin’ny fampandrosoana ny vokatra lavanila eto Fenoarivo Atsinanana…”, hoy i Marc Ravalomanana.
Ankoatra izay, tsy nohadinoin’ny kandidà laharana faha-25 ny nanentana ireo mponina amin’ny fanatanterahana ny adidy masina sy fanehoana ny safidy amin’ny alalan’ny latsa-bato. “Mitaona anareo aho, tanteraho ny adidinareo ho fanehoanareo ny safidinareo ary aoka isika hahay hisafidy tsara tsy ho voavily amin’izay tsy safidinareo akory. Masina izany safidim-bahoaka izany, ka tokony ho mailo ny rehetra tsy ho voarebireby. Ianareo izay mbola tsy nahazo kara-pifidianana nefa tafiditra anaty lisitra, alaivo eny amin’ny fokontany misy anareo izany mba ahafahanareo manefa ny adidinareo ho an’ny tanindrazana”, hoy hatrany ny kandidà Marc Ravalomanana.
Tetsy andaniny, nanoro sy nampianatra ny mpifidy momba ny latsa-bato ihany koa ny kandidà laharana faha-25 tamin’ny alalan’ny bileta fanabeazana mpifidy…
Notontosaina omaly teny amin’ny kianja monisipaly Mahamasina ny lanonana lehibe ara-miaramila, izay niompana tanteraka tamin’ny famindram-pibakoina arak’asa. Izany lanonana izany dia notronin’ireo manam-boninahitra, izay notarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo olo-manan-kaja isan-tsokajiny avy eo anivon’ny ...Tohiny